हिन्दूधर्मको सबैभन्दा पवित्र तीर्थस्थल कैलाश पर्वत जहाँ ॐकार र डमरुको आवाज गुन्जिरहन्छ ! एक से*यर गरी दर्शन गर्नुहोस् – Jagaran Nepal
हिन्दूधर्मको सबैभन्दा पवित्र तीर्थस्थल कैलाश पर्वत जहाँ ॐकार र डमरुको आवाज गुन्जिरहन्छ ! एक से*यर गरी दर्शन गर्नुहोस्
स्वस्थानी ब्रतकथा, स्वस्थानी माताको महिमा बढाउ :
सात जुनीको पाप नष्ट गर्ने कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा
कैलाश पर्वतलाई भगवान शिवको निवास मानिन्छ । यो हिन्दूधर्मको सबैभन्दा पवित्र तीर्थस्थल पनि हो । कैलाश पर्वत एक रहस्यमयी पर्वत हो जसमा आजपनि धेरै राज जोडिएको छ ।कैलाश पर्वतलाई धर्तीको केन्द्र नि मान्ने गरिएको छ । मानसरोवर स्थित कैलाश पर्वतमा साक्षात भगवान शिव विराजमान छन् भन्ने हिन्दूहरुको मान्यता रहेको छ । त्यसैले पनि जीवनमा एकपटक कैलाश मान सरोवरमा जानैपर्ने हिन्दूहरुको धार्मिक मान्यता रहेको छ ।